यस लेखमा हामी Wands को कार्ड ऐस कुरा हुनेछ। Tarot को अर्थ फिर्ता, वास्तव मा, यस प्रेतविद्यासम्बन्धी सिस्टम थियो जब मध्य युग, मिति। त्यसपछि प्रमुख र गौण arcana यी कार्डहरू साझेदारी गर्न परम्परा। नक्सा, आज हामी बोल्न जो महत्त्व, उत्तरार्द्ध समूह पर्छ। सुरू गरौं।
यो हरियो शाखा twined रड (छडी) वा Wands को ऐस कार्डमा एक क्लब पकड छ कि एक हात देखाउँछ। को Tarot यो सबै को मूल्य तिनीहरूले चित्रित के मा निर्भर गर्दछ। र Wands को ऐस कुनै अपवाद छ। त्यसैले, छडी संकल्पलाई र आवश्यक भएमा युद्धमा लड्न, सेना को उपस्थिति क्षमता प्रतिनिधित्व गर्छ। शाखा र पात - को जरा जमीन, अमरता एक प्रकारको बाहिर झिकेर छन् भने पनि रोक्न गर्दैन वृद्धि।
तसर्थ, यो कार्ड मतलब: नयाँ उपलब्धिहरू, विचार र विचार को उद्भव हुन; जीवनको मूल परिवर्तन; एक नयाँ तरिका मा विश्व चेतना। यो कार्ड नयाँ विचार र जीवन मान समझ को विकास केन्द्रित हुनेछ जो एक विशाल ऊर्जा, रकम को उद्भव heralds। यो उपचार गर्न एक सानो समान छ कार्ड को मूल्य तरवार को ऐस। Wands को ऐस, तर, यो संग सिर्जना र सञ्चालन मा मदत गर्न सक्छ कि एक बौद्धिक शक्ति वहन र अन्यसँग लड्न भन्दा, भित्री मुक्ति थप निर्देशित छ।
को Tarot डेक मा किनेकी मानिसलाई खोल्न सक्छ भन्ने अवसर प्रतिनिधित्व गर्छ। यस मामला मा, सफलता र आन्तरिक वृद्धि को संभावना।
यस परिदृश्य मा मूल्य
अक्सर, एक प्रसार मा Wands को ऐस को उपस्थिति क्यारियर मुद्दाहरू बुझाउँछ, तर यो सधैं मामला छ। नक्सा चिनो सक्छ र जीवन, अनपेक्षित घटना, भाग्य को twists मा परिवर्तन। हामी आ परिवर्तन डराउनु हुँदैन। मात्र जोखिम आफ्नो संभावित पूरा गर्न मदत गर्नेछ।
Wands को ऐस ऊर्जा बढाउँछ र अन्य कार्डहरू व्यवहार गर्नुभयो। तिमी अगाडी गिर र तरवार राजा पनि ऊर्जा क्षेत्रको सम्बन्धित भने, तपाईं पक्का हुन सक्छौं: हाम्रो योजना सफल। तपाईं शुभकामना र inexhaustible ऊर्जा हुनेछ। मुख्य कुरा - आफ्नो मौका सम्झना छैन।
जब Wands (अन्य कार्डहरू अलिकति यसको मूल्य परिवर्तन हुन सक्छ संग संयोजन) को ऐस को व्यक्तित्व मा परिदृश्य प्रतीक हुनेछ:
जोखिम लिन इच्छुकता।
यो कार्ड भावी विजय बताइएको, सबै भन्दा साहसी विचार को प्रदर्शन विजय। साथै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि जोखिम लिन तयार छ जो एक, बलियो विश्वस्त र उत्प्रेरणा व्यक्तिको रूपमा।
क्यारियर विकास, आफ्नो आनन्द र Wands को ब्यालेन्स ऐस मा नयाँ व्यापार उद्यम heralds। को Tarot को मूल्य अक्सर मानव जीवनको पेसा क्षेत्र संग सम्बन्धित छ। र Wands को ऐस उहाँले योजना को कार्यान्वयन मा मदत गर्नेछ जो नयाँ विचार र सफल योजना, शुभकामना र अवस्थामा, को उद्भव सुझाव vysheoboznachennyh बाहेक कुनै अपवाद छ। मात्र अवस्था - पूर्ण आफ्नो मामला दिइएको हुनुपर्छ, यो कार्ड आधा उपाय स्वीकार गर्दैन।
क्यारियर विकास लिङ्क गरिनेछ र सामाजिक प्रतिष्ठा संग। त्यसैले कार्ड उल्टाउन पतन यदि Wands को ऐस प्रतीक गर्न सक्छन् र सार्वभौमिक को अनुकूल परिदृश्य मा पहिचान र प्रतिष्ठा पतन।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो परिवर्तन Wands को ऐस heralds। तपाईं पहिले नै साझेदार छ भने निकट भविष्यमा सम्बन्ध, अभूतपूर्व आवेग र originality पाउन हुनेछ। भने, त्यसपछि एक उज्ज्वल नयाँ शौक लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तर नक्सामा मात्र मौका दिन्छ, त्यसैले तपाईँले मौका सम्झना भने, थप यो प्रस्तुत गरिनेछ, सावधान हुन।
हामी पनि Wands को सुट आगो तत्व गर्न भन्छिन् कि सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसैले, सम्बन्ध हुनेछ हामी भनौं, ज्वलनशील। यो राम्रो वा खराब छ, मात्र समय भन्नेछु।
Wands को ऐस को सरल अर्थमा virility, आवेग, बलियो यौन भावना, उज्ज्वल स्वभाव प्रतिनिधित्व गर्छ। यो कार्ड भावुक र आँधी रात बैठक, भावुक tryst प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। नक्सा एक बच्चा, सन्तानका लागि सबै बिन्दु गोदभराई हेराल्ड सक्छ।
तपाईं सम्बन्ध मा ठहराव छ भने, Wands को ऐस हालको जडान र नयाँ, थप भावुक को उद्भव तोडने अर्थ हुन सक्छ।
कार्ड को संयोजन
अब अन्य Tarot कार्ड संग Wands को ऐस को संयोजन कुरा गरौं।
यो एक केटी त्यो प्रेम मानिस मा सोच भने, विश्व को प्रमुख Arcana वा सूर्य संयोजनमा हाम्रो कार्ड सफल विवाह मतलब हुनेछ कि विश्वास छ। तथापि, एक पटक, यो केही समय लाग्न हुनेछ। यो Wands को सुट सम्बन्ध को औपचारिक पक्ष लागि परंपरागत जिम्मेवार छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
"कप को ऐस - Wands को ऐस" - दुई किनेकी संयोजन पक्कै बलियो र उत्साहित संघ भविष्यवाणी गर्छ। कुनै गल्ती बनाउन, राम्रो भाग्य र राम्रो भाग्य आफ्नो पक्षमा हुनेछ। यस मामला मा, संघ प्रतिज्ञा कप को ऐस एक परिपक्व र चिरकालीन प्रेम signifies रूपमा, टिकाउ हुन।
"कप को ऐस र तरवार राजा" को संयोजन किनभने तपाईंको बौद्धिक गुणहरू को हुनेछ भन्ने क्यारियर क्षेत्रमा सफलता चिनो हुनेछ। साथै अरूको आँखा मा वृद्धि रूपमा। तरवार राजा, बिजुली, बुद्धि र व्यावसायिकता को एक प्रतीक यो सबै धन्यवाद।
कार्ड को भित्री अर्थ
रचनात्मक शक्ति demiurge भगवान Wands को ऐस (को Tarot अर्थ अक्सर philosophically व्याख्या गर्न सम्भव छ) प्रतिनिधित्व गर्छ। यो उत्सर्जन-मुक्त र unbridled ऊर्जा। वास्तवमा, पुरुष रचनात्मक सिद्धान्त यस रचनात्मक शक्ति। र सुरुमा रचनात्मक कार्य inextricably को संग जोडिएको छ यौन ऊर्जा, मानव जगतले सिर्जना भाग। Wands को ऐस दुवै प्रेम र क्यारियर क्षेत्रमा लागू किन छ।
साथै, नक्शा प्रतीक विश्व ट्री। बुद्धि प्राप्त गर्न एक लागि आफूलाई बलिदान जो धेरै कुरा। Wands को ऐस सबै हामीलाई भ्रमण अन्तरदृष्टि, ठूलो विचार र असामान्य विचार किन प्रतिनिधित्व छ।
Wands को ऐस उल्टो
माथि-तल कार्ड गिरावट, काममा निराशा र कुण्ठा, ठहराव, विचार को कमी बारेमा चेतावनी हो। यस अवस्थामा, व्यक्तित्व किनभने आफ्नो हिचकिचाहट को हराउछ गर्ने असुरक्षित मानिस कसरी सोच छन् भनेर वस्तु चिनारी हुनेछ।
साथै, Wands को उल्टो ऐस छ:
झूटा सुरु। आशा भेटे छैन, बबल फुट्छ। उत्पादन मा गिरावट, कम आय, inefficiency - एक परिणाम रूपमा।
कम जाँगरको: टोन कमी, थकान, निराशा, कमजोरी, केहि गर्न इच्छा को अभाव। बाँझोपन वा दुर्बलता संकेत हुन सक्छ।
आपसी हित को कमी। द्वन्द्वमा छैन प्रकट, तर सम्बन्ध, उत्साह को गिरावट को थकित। तपाईं कार्ड थियो, र questioner व्यक्तिगत सम्बन्ध वर्तमान छैन भने, त्यसपछि Wands को ऐस आकर्षण र यौन ऊर्जा को हानि बारे बोल्न, र फलस्वरूप, नयाँ सम्बन्ध को उद्भव को कुनै सम्भावना छैन।
अभिप्रेत लक्ष्य को इन्कार, आफ्नो योजना को कार्यान्वयन ढिलाइ।
आत्म-शङ्का, भविष्यमा, अनिश्चय, निभाउँछ उत्सुक GenericName एक निराशावादी दृश्य। तपाईं Wands को ऐस यो स्वार्थ र दोष-खोजन बारेमा भन्छन् सक्रिय कार्ड घेरिएको फल्स बारी भने। तथापि, मानिसहरू भविष्यमा सफलता को लागि शक्ति बचत भन्ने तथ्यलाई प्रमाण हुन सक्छ।
यस परिदृश्य यो कार्ड गिर भने, तपाईं नाटकीय परिवर्तन केही प्रयास गर्नु हुँदैन। यो गिरावट को अवधि पछि सम्म, शान्तपूर्वक प्रतीक्षा राम्रो छ। यो स्थितिमा अग्रसर सजाय र मात्र स्थिति worsen हुनेछ। यो तपाईं कार्य गर्न मौका गर्दा क्षण सम्म शक्ति राख्न राम्रो छ।
Tarot 'दिन कार्ड "द्वारा प्रेतविद्यासम्बन्धी
Wands को ऐस दिन नक्सा रूपमा गिर भने, यो तपाईं ऊर्जा को एक वृद्धि अड्केको budge मदत वा नयाँ व्यापार सुरु हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा। कुनै पनि आज कार्य काँध मा तपाईं हुनेछ। मुख्य कुरा हो - आफ्नो क्षमता मा विश्वस्त र आशावादी हुन। यो Tarot प्रदान सक्ने सबै भन्दा राम्रो अवसर को छ।
Wands को ऐस को दिन मानचित्र पनि मात्र आनन्द र नयाँ अवसर हुनेछ भन्ने अनपेक्षित र आश्चर्य लागि तयार। तपाईंको मौका सम्झना छैन।
रानी Pentacles: मूल्य (Taro)। एक सम्बन्धमा Pentacles को रानी
प्राचीन Futhark "Inguz" rune। Rune: सम्बन्ध मा मूल्य, काम, स्वास्थ्य
Runes र आफ्नो अर्थ
अनुमान Runes। Odin को Rune
एल्यूमीनियम आफ्नै हात कास्टिङ
फलाम Babyliss कर्ल गोप्य C1000E: सिर्जना घरमा कर्ल
रोटी तल्ला troughs - यो के हो? चूल्हा रोटी लाभ। चूल्हा रोटी नुस्खा
स्वास्थ्य बीमा नीति नयाँ मोडेल हो म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्? मास्को र मस्को क्षेत्र मा नीति म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्?
राष्ट्रपति का नातिनी। Xenia Gorbachev। जीवनी र व्यक्तिगत जीवन